Khilaafka Madaxda Sare ee Dowlada oo saameyn ku yeeshay shaqada hay’ado ka tirsan dowlada Federaalka – idalenews.com
Hay’adaha Bulsharada Riyidka ayaa bilaabaya iney culeeys ku saaraan labada Masuul joojinta qilaafka u dhaxeeya, si aanu u cakirin shaqada dowladda iyo xiriirkii bulshada
Maanta waxaa Muqdisho ka howl bilaabaya Gudi loogu magacdaray Gudiga Culeeys Saarka, oo ku caadaadin doona hay’adaha dowladda iney qilaafka joojiyaan, kadib markii ay Madaxweynaha iyo Reysal-Wasaarihiisa ku guul dareeysteen iney hoos u xaliyaan xurgufta soo kala dhex gashay.
Bulshada Rayidka oo gudigan magacaawday ayaa horay u shaacisay in qilaafka Labada Masuul uu yahay bilowga kala qeysanka madaxda dowladda, shacabka iyo qabaa’ilada Soomalaiyeed, sidaas daraadeedna loo baahan yahay iney madaxweynaha iyo reysal-wasaaruhuba hoos u dhigan waxa ay kala tabanayaan.
Sii xoogeysiga qilaafka labada masuul ee ugu sareeysa hay’ada fulinta ayaa sidoo kale caqabda ku ah hay’adaha amniga oo la rumeeysan yahay iney sugista nabadgelyada ku adkaan doonto, oo waxaa lawada fiirsanayaa qilaafka sarre, sida ay SOSHENSA, hay’ada Jilaayaasha aan Dowligi ahayn ku warranatay goor sii horeeysay.
Dhamaan adeegyada bulshad loo hayay ayaa istaagi doona, waxaana niyad jabaya beesha caalamka oo ah udub dhexaadka dowladda jirta, taas waxaa loo baahan yahay iney arkaan madaxda iyaga uun isu jeeda, ayay sidoo kale SOSHEENSA sheegtay
Dadka u dhuun duleela arrinkan cidba meel ayay ka eegeysaa, oo tusaala ahaan dad baa qaba in dastuurka dib loogu noqdo oo la ferageliyo awoodaha dastuuriga ah ee madaxweynaha iyo reysal-wasaaraha, kuwa kalena waxay rumeeysan yihiin in si looga hortago qilaaf oo dhan ay Somalia yeelato Madaxweyne ama Reysal-Wasaare.
Waxaa jirta fikrad Kale oo sheegeeysa inuu dalku yeesho madaxweye iyo ku xigeenkiis oo kala awood badan.
Saalax Sheekh Ibraahim oo ka tirsan hay’ada Culumada Soomalaiyeed ayaa ku talinaya in Somalia loo sameeyo nidaam uu madaxweynuhu awooda leeyahay, meeshana laga saaro nidaamka hada jira ee uu baarlamaanku awooda leeyahay.
Waxaa intaas ka dheeraad ah in hadii ay xitaa sidaas talo wanaagsan u muuqato ay hadana jirto baqdin ah inuu madaxweynuhu noqdo mid kaligi talis ah, oo Somalia maquuriya dhibaato ka darran tan ay hada la kufaa dhaceeyso.
Sidaas waxay ka dhex guuxeeysaa Cismaan Aadan Cadde, oo ah ah wiilka madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya.
Cabdi Abshir Dhoore, oo horay ola soo shaqeeyay sedex xukumadood oo ay madaxweynhoodii isqilaafeen, ayaa sheegay inuu hubo inuu baarlamaanku noqon doono meesha ugu dambeeysa ee ay labada masuul ukala loolaami doonaan, wuxuuse ka digay in dhaqaalihii qaranka loo adeegsado qilaafka taagan.
Qeyb kamida aragtida Dhoore waxaad moodaa iney durba soo uf baxday, oo hada waxay xubno baarlamanaka ka tirsan wadaan mooshin ka dhan ah Reysal-Wasaare Saacid, iyadoo uu waliba jiro guux hoose oo sheegaya inuu Reysal-Wasaaruhu qarka saran yahay, taasise ma cada, hase ahaatee docda kale Reysal-Wasaare Saacid maka badbaado doonaa qaroofeeyda baarlamaanka?
Hase ahaatee, hadii uu saas ku baxo waxa uu noqona Reysal-Wasaarihii 10-aad oo kaga taga xilka qilaaf soo kala dhexgala isaga iyo madaxweynihiisa, kan ka dambeeya ee imaan doonase muxuu ka bedelnaan doonaa?
Daawo: 2 Wado oo muhiim ah oo dayactir uu ku socda & Barnaamijka ka hadlaaya Horumarka Magaalada Muqdisho